I-Hardware Processing Processing-i-K-Tek Machining Co, Ltd.
I-K-Tek machining Co., Ltd.iTshayina. Inkampani yethu inokwenza imveliso yazo zonke iintlobo zamalungu oomatshini ngokuchaneka ngokweemfuno zabathengi, ngoku sinabasebenzi abangama-200. Iimveliso zethu malunga neepesenti ezingama-20 zithunyelwa eJapan, 60% zithunyelwa eYurophu naseMelika, sinokukunika umgangatho ophezulu kunye nexabiso lokukhuphisana.
I-CNC yokugaya isisombululo esisebenzayo kwiindleko zomatshini kunye neemilo ezinzima kunye / okanye ukunyamezelana okuqinileyo, ngakumbi kwiiprojekthi zevolumu ephantsi. I-CNC yokugaya ngokuchanekileyo inokuvelisa phantse nayiphi na imilo apho izinto zifikeleleka ngezixhobo zokusika ezijikelezayo. Kwakhona, ukuba unamacandelo angqukuva okanye isikwere kwaye unobume obukhethekileyo okanye obunzima, sinokunceda. Ngamandla esiko e-fixturing, sinobuchule bokugaya ngokuchanekileyo kunye nokuchaneka ngokuchanekileyo kwe-hard-to-hold, ii-castings ekunzima ukuzenza, i-forgings kunye nezinye izinto zesinyithi.
I-K-Tek ibonelela ngeenkonzo ezichanekileyo zokujika kwe-CNC kuluhlu olubanzi lwamashishini kunye nokusetyenziswa. Iinkqubo zokuguqula zibandakanya ukusika, ukujongana, ukusongela, ukwenza, ukubhola, ukujija, kunye nokudika. Sinokusebenza ngensimbi, i-stainless, ubhedu, ubhedu, ubhedu, isinyithi, i-nickel, i-tin, i-titanium, i-Inconel kunye nokunye. Kananjalo sinokuprinta iiplastikhi ezinje ngeABS, iPolycarbonate, iPV, kunye nePTFE. Ubungakanani beziqwenga zomsebenzi ziqala ukusuka ngaphantsi kwe-1 "ububanzi ukuya kuthi ga kwi-10" ubukhulu, kwaye ukuya kuthi ga kwi-12 "ubude, kuxhomekeke kulungelelwaniso lwenxalenye. Thru umthamo wokuzala kwi-lathes ufikelela kwi-3 "ubukhulu.
Ezintlanu axis Machining:
Machining ezintlanu-axis kusivumela ukuba ukuhambisa workpiece ecaleni asi ezahlukeneyo ezintlanu ngaxeshanye. Oku kubonelela ngokuchaneka ngokuchanekileyo kwamalungu antsonkothileyo kunye nokukwazi ukulahla izinto ezininzi kugqityiwe… ke oko kwenza ukuba obu buchwephesha buhambele phambili kakhulu. Ezintlanu-axis CNC machining kunye nokugaya emacaleni amahlanu nayo ikwalungele ukuphumeza ogqibeleleyo umphezulu ocoliweyo ngokuya kufunwa ngabathengi bethu.
Ukucinywa kombane ngombane (i-EDM) yitekhnoloji ethe ngqo ukusika phantse naziphi na izinto ezisebenza ngombane. Ucingo olucekeceke ngombane lwe-EDM olubekwe phakathi kwezikhokelo ezibini zoomatshini zenza i-electrode enye, ngelixa izinto ezisikiweyo zisenza enye i-electrode. Ukukhutshwa kombane phakathi kwee-electrode ezimbini (ucingo kunye nomsebenzi) kudala iintlantsi ezisika umbandela. Ngenxa yokuba ucingo oluhlawulisiweyo aluzange luqhakamshelane nomsebenzi we-EDM kule nkqubo inokusetyenziselwa ukwenza iindawo ezincinci kunye nezithambileyo ezifuna amanqanaba okuchaneka kunye nobunkunkqele obungenakufezekiswa ngumatshini wendabuko.